Fimpima : folo taona ny « Herinandron’ny kabary » | NewsMada
Fimpima : folo taona ny « Herinandron’ny kabary »
Vanim-potoana iray lehibe ifaneraseran’ny samy mpikabary ny « Herinandron’ny kabary ». Folo taona amin’ity taona ity ny nanamarihan’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy (Fimpima) tsy niato izany tetikasan’ny foibe Fimpima izany. Ankoatra ny samy mpikabary, mahazo tombom-pahalalana amin’ny « Herinandron’ny kabary » ihany koa ny olona rehetra satria omena ampaham-potoana lehibe ny fampahalalana ny kolontsaina isam-paritra, kilalaon-tsaina, fiofanana samihafa, sns.
Tsy nivoaka an’Antananarivo ny nanatontosana ity hetsika ity raha tsy tamin’ny taona 2015 ka nitondrana izany tany Morondava. Any Mahajanga kosa ny 7 aogositra ka hatramin’ny 13 aogositra izao ny andiany fahafolo. Fotoana hanatanterahana rahateo ny fivorian’ny komity foibe, hanaovana tatitra ho an’ny asa vita sy hanapahana ny tetikasa taona 2017.
Marihina fa ankoatra ny mpikambana avy eto amin’ny lafivalon’ny Nosy, tonga hanatrika ity « Herinandron’ny kabary » mandia ny fahafolo taona ity ihany koa ireo mpikambana avy ao amin’ny Fimpima maneran-tany avy any ivelany.
Anisany hisongadina amin’ny fiofanana ho an’ny rehetra ny lohahevitra : « Ny fifampiraharahana », « Ny fampivoarana ny fahaiza-manao » ary ny fifampizarana eo amin’ny fahalalana ny teny malagasy.